Iran ayaa dil ku fulisay 20 qof oo ay ku eedeysay inay gaysteen fal argagixiso - BBC News Somali
Iran ayaa dil ku fulisay 20 qof oo ay ku eedeysay inay gaysteen fal argagixiso
4 Agoosto 2016
Xigashada Sawirka, AFP
Ku dhawaad kun qof ayaa lagu soo waramayaa in dil lagu fuliyay Iran sanadkii hore
Iran waxay xukun dil ah ku fulisay dad badan oo 20 qof dhan oo ay sheegtay inay ka tirsanaayeen koox argagixiso oo Sunni ah. Xeer ilaaliyaha guud waxaa uu sheegay in raggaasi lagu helay inay geysteen qaraxyo xiriir ahaa iyo weerarro lagu qaaday deegaanno dadka Kurdiyiinta ee galbeedka dalka Iran, kuwaas oo lagu dilay hoggaamiyeyaal Sunniyiin ah iyo sidoo kale dumar iyo carruur.
Kooxda xuquuqda aadanaha waxay sheegtay in ugu yaraan mid raggaas ka mid ah xukunka dilka lagu riday kaddib dhowr daqiiqo markii dacwaddiisu socotay.
Qoysaska ragga dilka lagu fuliyay waxaa looga yeeray xabsiga halkaas oo Talaadadii lagu hayay booqashadii ugu dambaysay ee dadkooda ay arkaan. Laakiin waxaa la sheegay inay heleen wicitaan telefoonno intii ay u sii socdeen oo loo sheegay inay qabuuraha aadaan beddelkii ay aaskooda ka tegi lahaayeen.
Iran waxay sheegtay in raggaasi ay qayb ka ahaayeen koox argagixiso ah oo Sunniyiin ah loona yaqaan Tawxiid iyo Jihaad, oo ay ku eedeynayso inay weerarro badan ku qaadday galbeedka dalka Iran, oo ay ku jirto dilkii khaarijiska ahaa ee laba hoggaamiye oo Sunniyiin ah.
Kooxda reer Iran ah oo xuquuqda aadanaha u doodda waxay sheegtay in habka sharciga ee raggaas la marsiiyay uu aad u khaldanaa. Iran waxay xukun dil ah ku fulisay 250 qof ilaa iyo hadda sanadkan. Sanadkii hore tirada dadka xukunka dilka ah lagu fuliyay dalkaas waxaa lagu qiyaasay kun qof.
Guutada Soomaalida ee Ukraine oo magaalo kale weeraray kaddib qabsashadii Mariupol
Saacad ka hor
Maxaa ka jira in Madaxweyne Xasan Sheekh uu booqasho qarsoodi ah ku tagay Israa'iil?
25 Juunyo 2022
Doodda ku saabsan ilmo iska soo rididda ee sida weyn u kala qeybisay Mareykanka
4 Saacadood ka hor
'Ragga bidaarta leh oo halis ugu jira wadne xanuunka'
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 16 Disembar 2021
Cudurka sheegitaankiisa laga xishoodo ee sida ba'an u laaya dumarka
Guutada Soomaalida ee Ukraine oo muuqaal laga duubay iyagoo dagaal ku jira
Lix qaab oo aad uga hortagi karto bidaarta